ဂျိုင်းမြစ်ရေတိုးကာ တံတားအဝင်ဂျိုင်းဘက် လေးပေကျော်အထိရေကျော် - Yangon Media Group
ဂျိုင်းမြစ်ရေတိုးကာ တံတားအဝင်ဂျိုင်းဘက် လေးပေကျော်အထိရေကျော်
ဂျိုင်း-ကော့ကရိတ် (Pontoon)တံတားပေါ်ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများဖြတ်သန်းခွင့် ယာယီပိတ်ထား
မိုးခေါင်၍ သဖန်းဆိပ်ဆည် ရေခန်းကာပေါ်လာသော ကျွန်းလှမြို့ဟောင်းသို့ ဒေသခံများ သွားရောက်လည်ပတ်
ပြိုကျသည့် ကျောက်မီးသွေးတွင်း အတွင်းပိုင်းတွင် မြေပြိုကျမှုများဖြစ်ပေါ်နေ၍ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်နားထားရ
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းတို့ကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ငါးကန်ဧက ၇၈၀ ကျော်ရေကြီးနစ်မြုပ်၊ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၈၀ဝ ခန့်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့
မလတ်တောင်ကဲ့သို့ တောင်ပြိုမှုမဖြစ်စေရန် ကျောက်မိုင်းတူးဖော်သည့်နေရာများကို စစ်ဆေးနေ
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၉ – ဂျိုင်းမြစ် ရေတိုးကာ တံတားအဝင် ဂျိုင်း ဘက် လေးပေကျော်အထိရေကျော် နေ ခြင်းကြောင့် ဂျိုင်း-ကော့ကရိတ် (Pontoon)တံတားပေါ် ကုန်တင် ယာဉ်ကြီးများ ဖြတ်သန်းခွင့်ယာယီ ပိတ်ထားကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် လမ်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
မြဝတီ-ဘားအံ-ရန်ကုန် ကုန် သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ဂျိုင်း (ပွန်တွန်း)တံတားတွင် ဩဂုတ် ၉ ရက် နံနက် ၉နာရီခွဲခန့်မှစတင်၍ဂျိုင်းမြစ်ရေတိုးကာ တံတားအဝင် ဂျိုင်းဘက်လေးပေကျော်အထိ ရေ ကျော်နေသဖြင့် အတက်၊ အဆင်း ယာဉ်များအားလုံးကို ယာယီပိတ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ရေနှစ်ပေခန့်အထိ ကျ ဆင်းသွားပါက ကုန်တင်ယာဉ်များကို အလှည့်ကျ တစ်ဖက်အစီးရေ ၅၀ စီ ဖြတ်သန်းခွင့်ပေးသွားရန် စီစဉ် ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာန ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစောသောင်း ဟန်က “လက်ရှိရေတက်နေတော့ ပွန်တွန်းကိုဖြတ်လို့မရဘူး။ ကားတွေ က လက်ရှိရပ်နေရတာပေါ့။ အ တက်၊ အဆင်း နှစ်ဖက်စလုံးရပ်နေရ တယ်။ မနက်ပိုင်းကတည်းက ရေ တက်တော့ တစ်စီးမှဖြတ်လို့မရဘဲ ရပ်စောင့်နေကြရတယ်။ ရေနောက် ထပ် တစ်ပေလောက်ကျသွားရင် တော့ ပြန်ဖြတ်သန်းလို့ရသွားမှာပါ။ အခုအချိန်မှာ ရေက သုံးပေကျော် လေးပေနီးပါးလောက် ရှိနေသေး တယ်။ ရေနှစ်ပေလောက်ရှိမယ်ဆို ရင် ကားတွေပြန်ဖြတ် လို့ရပြီ။ အ တက်ရော၊ အဆင်းရော ကားတွေ တန်းနေတော့ ရေကျသွားရင် ဒီဘက် အစီး ၅၀လွှတ်မယ်။ ဟိုဘက်အစီး ၅၀လွှတ် မယ်။ အလှည့်ကျ မျှလွှတ် သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်}}ဟု ဩဂုတ် ၉ရက်က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဩဂုတ်၅ရက်မှစတင် ၍ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကရင်ပြည်နယ် ဂျိုင်းမြစ်ရေမြင့်တက် ခဲ့ပြီး ဂျိုင်း -ကော့ကရိတ်(Pontoon Bridge) ချဉ်းကပ်တံတားပိုင်းများ ရေကျော်သဖြင့် ကုန်တင်ယာဉ်များ ကို အလှည့်ကျဖြတ်သန်း ခွင့်ပေးခဲ့ ရာ ၌ ဩဂုတ် ၉ ရက်တွင် ခါလီယာဉ် ကြီးတစ်စီးမှာ လမ်းချော်တိမ်းစောင်း မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဦးစောသောင်းဟန်စိုးက “အဲ ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းက ယာဉ်မောင်း က အရက်သောက်မူးပြီးတော့ တက် တာမှာ အဆင်းမှာ လမ်းချော်သွား တာ။ ခါလီကားပါ။ ကုန်မပါဘူး။ ယာဉ်မောင်းတွေအနေနဲ့ ဒီလိုအခြေ အနေမှာ ရေနှစ်ပေလောက်မှာ risk လုပ်ပြီးဖြတ်ရ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အ ရက်သေစာမသောက်စားဘဲ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိစွာ ဖြတ်သန်း ဖို့လိုတာပေါ့။ တချို့ ယာဉ်မောင်းတွေ က ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်မောင်း ပြီးလမ်းချော်မှုကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွား တာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ ပွန်တွန်း တံတားက မနှစ်ကလည်းရေတက် ပါတယ်။ ဒီနှစ်ပိုဆိုးသွားတယ်ဆို တာကရေပိုတက်သွားတယ်။ မနှစ် ကထက်စာရင် တစ်ပေထက် ပိုတက် သွားတယ်။ ကားတွေကိုအလှည့်ကျ လွှတ်နေရတာဖြစ်တော့ စောင့်ဆိုင်း တဲ့ကားတွေလည်း များလာတယ်။စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ကားအရေအတွက် သေချာမသိပေမယ့် လက်ရှိအနေ အထားအရဆိုရင် အတက်ဘက်ရော အဆင်းပါ လေးဖာလုံလောက်စီ ကား တွေတန်းနေတာ တွေ့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါလမ်းချော်တိမ်းစောင်း မှုဖြစ်ပေါ်နေသောကားကို ဘက်ဟိုး နှင့်ဆွဲတင်ပေးရန်ရှိသော်လည်း တွဲ ကားနောက်ဝင်ရိုးမှာ တံတွား Gar Der နှင့်ချိတ်နေခြင်းကြောင့် Gar De ပြုတ်ထွက်နိုင်ပြီး တံတား လုံးဝ ပိတ်သွားနိုင်သဖြင့် Crane ဖြင့်မယူ ရန်စီစဉ် ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီနယ်စပ် ဒေသသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မျိုးနိုင်က “သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရချိန် တစ်ရက်ကားအစီး တစ်ရာဖြတ်နိုင် ဖို့တောင်အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဖြည်း ဖြည်းမောင်း ကြပါ။ လမ်းညွှန်တွေ လည်းသေချာပြနေပါတယ်။ တိတိ ကျကျလိုက်နာပါ။ အရက်၊ ဘီယာ လည်းမသောက်ကြပါနဲ့။ တစ်ရက် ကို ပုံမှန်ကားအတက်၊ အဆင်း ၅၀ဝ ဝန်းကျင်ဖြတ်သွားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးရတဲ့တံတားဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ် သွားလို့ ဖြစ် မဖြစ်စဉ်း စားပေးကြည့် ပါ။ ဒီရေအတက်အကျနဲ့ချိန်ပြီး နေ့ ညအချိန်အခါမရွေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးရပါတယ်။ ယာဉ်ကြီးတွေအားလုံး ကိုလည်း အဆင်ပြေပြေလိုရာခရီး ရောက်စေလိုပါတယ် ” ဟု ပြောသည်။
ပေါင်မြို့နယ်အတွင်း တောင်ပြို အိမ်များပိမိ၊ သေဆုံးသူ ၁၆ ဦးတွေ့ရှိ၊ ၂၈ ဦးအား ကယ်ထုတ်နိုင်
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မြဝတီ-ကော့ကရိတ်အာရှအမြန်လမ်း၌ တောင်ပြိုကျမှုကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု သုံးနာရီခန့်ဖြစ်ပွား
ထိုင်းခရီးသွားများအား မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်မှ မြဝတီမြို့သို့သာမက ကော့ကရိတ်၊ ဘားအံနှင့်မော်လမြိုင်မြို့ထိပါ သွားလာခွင့်ပြုရန် လိုလားနေ
ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှအလိုရှိနေသည့် တရားခံပြေးအပါအဝင် ပြစ်ဒဏ်စေ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားခုနစ်ဦးကို မြန်မာ-ထိုင်း အမှတ်(၁)ချစ်ကြည်ရေးတံတား၌ ပြည်နှင်လွှဲပြောင်း
ယောက်ျားဟောင်း၊ လက်ရှိချစ်သူ တို့နဲ့တွဲပြီး ဒေါ်လာ ၃၅ သန်းလှူတဲ့ ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်
ဟီလာရီကလင်တန်က CBS ၏ ရုပ်သံစီးရီးမှာ သရုပ်ဆောင်မည်
ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို ဖလမ်း၌ စည်ကားစွာ ကျင်းပမည်
ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွင် VAR အသုံးပြုတော့မည်
ဇီဝမျိုးစုံ၊ မျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ န?
၂၃ နှစ်ကြာပြီးနောက် တတိယအကြိမ် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ်ကို ပြန်လည် စိစစ်တိုင်းတာမည်
”သားဖြစ်သူကို အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ဖို့ အတင်း မတိုက်တွန်းဘူး” မင်းသူ
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်မြင်ရန် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားတွင် လာရောက်ဆုတောင်းသည့် ကျောင်းသာ?
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး၏ အယူခံ ဇန်နဝါရီ ၁၁ အမိန့်ချမည်